अबको बाटो प्रगतिशील पूँजीवाद !
तस्वीर स्रोत : द डेली स्टार
कुन आर्थिक प्रणाली मानवको सुख तथा आनन्दका लागि उपयुक्त हुन्छ ? यो प्रश्नले वर्तमान युगलाई परिभाषित गरेको छ किनकि अमेरिका तथा अन्य विकसित अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद लागू गरिएको ४० वर्ष बितिसक्दा हामीलाई के कुराले काम गर्दैन भन्ने थाहा भइसकेको छ ।
नवउदारवादी परीक्षण अर्थात् धनीहरूका लागि करको दायरा घटाउने, श्रम तथा उत्पादन बजार नियमन नगर्ने, वित्तीयकरण तथा विश्वव्यापीकरण गर्ने काम पूर्णतः असफल भइसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको २५ वर्षको अवधिभन्दा अहिलेको आर्थिक वृद्धि कम छ र त्यो वृद्धि पनि अत्यधिक आय कमाउनेहरूमा गएर थुप्रिएको छ । उनीहरूभन्दा मुनिका व्यक्तिको आय भने स्थिर रहने, अझ घट्ने, भइरहँदा नवउदारवादलाई अब मृत घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।
नवउदारवादको स्थान लिन कम्तीमा तीनवटा प्रमुख राजनीतिक विकल्पहरू तयार छन् : उग्रदक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, मध्यमार्गी वामपन्थी सुधारवाद र प्रगतिशील वामपन्थ (मध्यमार्गी दक्षिणपन्थ चाहिँ नवउदारवादी हो र त्यो असफल भइसकेको छ) । तर प्रगतिशील वामपन्थीबाहेक अन्य विकल्पहरू त्यस्ता विचारधारामा अडिएका छन् जुन पहिल्यै नै मरिसकेका छन् वा मर्नुपर्छ ।
मध्यमार्गी वामपन्थीले नवउदारवादको मानवीय मुहार प्रस्तुत गर्छ । यसको लक्ष्य भनेको अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन तथा बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका नीतिहरूलाई एक्काईसौं शताब्दीमा ल्याउने अनि अहिले प्रचलनमा रहेका वित्तीयकरण तथा विश्वव्यापीकरणमा सामान्य परिवर्तन गर्ने हो । उता राष्ट्रवादी दक्षिणपन्थी चाहिँ विश्वव्यापीकरणलाई बहिष्कार गर्छ अनि अहिलेका सबै समस्याको दोष आप्रवासी र विदेशीमा थोपर्छ । तर डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालले नै देखाउँछ, यो धनीहरूलाई करछुट दिने, नियमन खारेज गर्ने तथा सामाजिक कार्यक्रममा लगानी नगर्ने चरित्र लिएर बसेको छ ।
यी सबैभन्दा फरक तेस्रो खेमाका मानिस चाहिँ प्रगतिशील पूँजीवादको पैरवी गर्छन् । यसले नितान्त भिन्न आर्थिक एजेन्डाको सिफारिश गर्छ र त्यो एजेन्डा चारवटा प्राथमिकतामा अडिएको छ । पहिलो : बजार, राज्य र नागरिक समाजबीचको सन्तुलन पुनः कायम गर्ने । सुस्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो असमानता, आर्थिक अस्थिरता र वातावरण विनाश बजारले जन्माएका समस्या हुन् र यिनलाई बजार आफैंले हटाउन सक्दैन । वातावरण, स्वास्थ्य, कार्यस्थल सुरक्षा तथा अन्य किसिमका नियमनमार्फत बजारलाई सीमामा राख्ने तथा आकार दिने सरकारको कर्तव्य हो । बजारले गर्न नसक्ने अनि गर्न नचाहने काम सरकारले गर्नुपर्छ, जस्तो आधारभूत अनुसन्धान, प्रविधि, शिक्षा र आफ्ना जनताको स्वास्थ्य ।
दोस्रो प्राथमिकता : सामाजिक साझेदारीका लागि बजारहरूले अझै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् तर उनीहरू विधिको शासनबाट शासित भएमा अनि लोकतान्त्रिक नियमन अनतर्गत रहेमा मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ । नत्र त व्यक्तिहरू अर्कालाई शोषण गरेर धनी हुन्छन् । उनीहरू नयाँ विचार ल्याएर धन उत्पादन गर्नुभन्दा पनि समाजलाई फाइदा नहुने गरी आफूलाई आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति(रेन्ट–सीकिङ) मा लिप्त हुन्छन् । अहिले जो जो मानिस अत्यधिक धनी छन् तिनीहरू सबैले यही बाटो अपनाएका हुन् । उनीहरूलाई ट्रम्पका नीतिहरूले फाइदा गरेका छन् । ती नीतिले धन उत्पादनका अन्तर्निहित स्रोतलाई नष्ट गर्दै रेन्ट–सीकिङलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । प्रगतिशील पूँजीवादले भने ठ्याक्कै यसको विपरीत गर्न खोजेको छ ।
यसैसँग तेस्रो प्राथमिकता जोडिन आउँछ । बजारको शक्ति केही संस्थामा केन्द्रीकृत हुँदा आएको समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । सूचनाको लाभ उठाउँदै, आफ्ना सम्भाव्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनिदिँदै अनि नवप्रवेशीलाई अवरोध तेर्स्याउँदै पहिले नै बजारमा रहेका ठूला कम्पनी अरूलाई हानि पुग्ने गरी ठूलो मात्रामा रेन्ट–सीकिङ गरिरहेका छन् । कर्पोरेट बजारको शक्तिमा वृद्धि हुनुका साथै कामदारहरूको बार्गेनिङ शक्ति घट्दै जाँदा नै असमानता यति उच्च बनेको हो र आर्थिक वृद्धि यति कमजोर भएको हो । नवउदारवादले चाहेको भन्दा थप सक्रिय भूमिका सरकारले निर्वाह नगरेमा यी समस्याहरू झनै जटिल बन्दै जाने निश्चित छ, अझ रोबोट प्रविधि र कृत्रिम प्रज्ञामा थप विकास हुँदै जाँदा यो समस्या झनै चर्किनेछ ।
प्रगतिशील एजेन्डाको चौथो महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्पर्क टुटाउनु हो । आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभावले एकअर्कालाई थप बलियो बनाइरहेका हुन्छन् र यिनले आफैंलाई मात्र अघि बढाइरहन्छन् । विशेषगरी अमेरिकामा धनी व्यक्ति तथा संस्थाहरूले चुनावमा असीमित खर्च गरिरहेका छन् । अमेरिका अहिले अलोकतान्त्रिक ‘एक डलर, एक भोट’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्दै जाँदा लोकतन्त्रका लागि आवश्यक चेक यान्ड ब्यालेन्स प्रणालीले काम नगर्ने सम्भावना हुन्छ । अनि त्यसपछि धनीहरूको शक्तिलाई कसैले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यो नैतिक र राजनीतिक समस्या मात्र हैन : कम असमानता भएका अर्थतन्त्रहरूले वास्तवमै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसैले प्रगतिशील पूँजीवादले राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई कटौती गर्दै आर्थिक असमानता घटाउन शुरू गरेको छ ।
वर्षौंसम्म चलेको नवउदारवादले गरेको क्षतिलाई न्यून गर्ने कुनै रामवाण छैन । माथि व्याख्या गरिएअनुसारको विस्तृत एजेन्डाले चाहिँ त्यसो गर्न सक्छ । तर निजी क्षेत्रले जन्माएको बजारको अत्यधिक शक्ति र असमानता जस्ता समस्याको सामना गर्न सुधारकहरू कत्तिको दृढ छन् भन्ने कुरामा सबैथोक निर्भर छ ।
विस्तृत एजेन्डाले शिक्षा, अनुसन्धान तथा धनका अन्य सही स्रोतहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसले वातावरणको रक्षा गर्नुपर्छ अनि जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नुपर्छ । अनि यसले कुनै पनि नागरिक राम्रो जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक हुने कुराबाट वञ्चित नहुने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । यस्ता प्रत्याभूतिमा आर्थिक सुरक्षा, काम तथा उचित ज्यालामा पहुँच, स्वास्थ्य सेवा तथा पर्याप्त आवास सुविधा, सुरक्षित सेवानिवृत्ति तथा सन्तानका लागि गुणस्तरीय शिक्षा पर्छन् ।
यो एजेन्डा महंगो छैन, वास्तवमा हामीले यसलाई ग्रहण नगर्दा चाहिँ घाटा हुन्छ । राष्ट्रवादी तथा नवउदारवादीहरूले प्रस्ताव गरेको विकल्पले थप आर्थिक सुस्तता, असमानता, वातावरणीय विनाश तथा राजनीतिक शत्रुता जन्माउँछ र तिनको परिणामको कल्पना पनि हामी गर्न सक्दैनौं ।
प्रगतिशील पूँजीवाद विपरीतार्थक शब्दावली हैन । यो त असफल भइसकेको विचारधाराको समुचित विकल्प हो । अहिलेको आर्थिक र राजनीतिक समस्याबाट बच्ने सर्वोत्कृष्ट अवसर यसले प्रदान गर्छ ।
प्रोजेक्ट सिन्डकेटमा प्रकाशित जोसेफ ई स्टिग्लिजको विश्लेषण
अर्थविद्हरूको प्रतिक्रिया : यो बजेटसँग जोखिम बहन गर्...
कालापानी सीमा विवाद समाधानका विकल्प : मोदीसँग सि...
जसपालाई संविधान संशोधन– नखाऊँ भने दिनभरिको शिका...
कोरोना महाव्याधिसँग उपभोगवादको साइनो : प्राकृतिक ...
गण्डकीको नीति कार्यक्रममा कृषि : एक पालिका एक उत्पादन